ခဈြရတဲ့ ဖခငျကွီးရဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ပရိသတျတှေ မမွငျဘူးသေးတဲ့ မိသားစု အမှတျတရ ပုံလေးတှနေဲ့ ဆုတောငျးပေးလာတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ – XB Media & News
စိုးပွညျ့သဇငျကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောမငျးသမီးလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခြိုးအစားကနြတဲ့ ကိုယျလုံးလေးနဲ့ သူမဝတျသမြှက ပှဲတိုငျးမှာ ထငျပျေါနတောကွောငျ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှေ အားကြ နှဈသကျနရေတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
အခြိနျတှအေကွာကွီး ပရိသတျအားပေးမှုရရှိထားတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျက အမာခံပရိသတျမွောကျမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ စိုးပွညျ့က မိဘနှဈပါးပျေါမှာလညျး သိတတျလိမ်မာလို့ မိဘတှကေိုလုပျကြှေးပွုစုနတေဲ့သမီးလေးဖွဈပါတယျ။အခုမှာတော့ ဖခငျကွီးရဲ့ မှေး နမှေ့ာ ပရိသတျတှမေမွငျဘူးသေးတဲ့ ငယျစဉျက မိသားစု အမှတျတရ ပုံလေးတှနေဲ့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလာပါတယျ ။
” Happy birthday သမီးခဈြတဲ့ဖဖေေ….အမွဲစိတျခမျြးသာခွငျးကိုယျကနျြးမာခွငျးနဲ့ပွညျ့စုံပါစေ……မှနျကနျတာကိုဘဲမွတျနိုး တဲ့ဖဖေေ. .စိတျနှလုံးကောငျးရှိတဲ့ဖဖေေ….ကနျြးမာခမျြးသာပွီး..ဖဖေအေရမျးလိုခငျြတဲ့အသိထူးဉာဏျထူး…တရားထူးမြားသိမွငျနိုငျပါစေ….🥰🥰🥰😘😘😘🎁🎊🎉” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အချိုးအစားကျနတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ သူမဝတ်သမျှက ပွဲတိုင်းမှာ ထင်ပေါ်နေတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အားကျ နှစ်သက်နေရတဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်တွေအကြာကြီး ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိထားတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်က အမာခံပရိသတ်မြောက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးပြည့်က မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာလည်း သိတတ်လိမ္မာလို့ မိဘတွေကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုမှာတော့ ဖခင်ကြီးရဲ့ မွေး နေ့မှာ ပရိသတ်တွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့ ငယ်စဉ်က မိသားစု အမှတ်တရ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာပါတယ် ။
” Happy birthday သမီးချစ်တဲ့ဖေဖေ….အမြဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ……မှန်ကန်တာကိုဘဲမြတ်နိုး တဲ့ဖေဖေ. .စိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဖေဖေ….ကျန်းမာချမ်းသာပြီး..ဖေဖေအရမ်းလိုချင်တဲ့အသိထူးဉာဏ်ထူး…တရားထူးများသိမြင်နိုင်ပါစေ….🥰🥰🥰😘😘😘🎁🎊🎉” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။